05 Agasti - 18 Agasti 2016
Agasti - 18 Agasti 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
KUGASELWA IZAKHIWO EZIBOLILE
Izindaba: Ikhasi 2
ABAHLALI BATHOLE AMATAYITELA
PRINCESS NKABANE UKUNGCOLISA nokulahla udoti budlabha yikhona okubonakala kuhamba phambili ekuvaleni imigudu yamanzi. Lokhu kuhlale obala ngesikhathi kunemvula enamandla esanda kubonakala muva nje eThekwini. Ngesikhathi kunale mvula enkulu, iningi lemigudu yamanzi eDolobheni ibingasakwazi ukudlulisa amanzi. Lokhu kudalwe kakhulu wudoti omningi okuyiwona ogcina usuvala le migudu yamanzi ingabe isakwazi ukusebenza kahle. OyiPhini leNhloko kwaStormwater and Catchment Management, uRandeer Kasserchun uthe abahlali baseThekwini kumele benze ushintsho ngokuthi babambe iqhaza ekuvikeleni imvelo. ?Ukuze sikwazi ukunciphisa ukuvaleka kwemigudu yamanzi ngokuzayo nokuqinisekisa ukuthi ingqalasizinda yethu ayidicileleki phansi ngokungenasidingo, kumele abahlali basebenzise
Landela imithetho kaMasipala
PRINCESS NKABANE UMASIPALA weTheku unezinhlelo zemikhankaso lapho ufundisa khona abantu ngezinto ezivumelekile eDolobheni kanye nezinhlawulo ezikhokhwayo kulabo abephula leyo mithetho. Abasebenzi bakaMasipala selokhu baqala ngoJuni 30 ukusabalalisa umyalezo wokuthotshelwa komthetho kanti sebevakashele izindawo eziningi okubalwa kuzo irenki yamatekisi oThongathi enhla nesifundazwe iKwaZulu-Natali, izingxenye eziseNingizimu yeTheku kanye neziseMpumalanga. UMuhammed Oomar, oyiChief Legal Advisor kuMasipala weTheku uthe imigqomo kadoti ukulahla udoti hhayi ukulahla emgwaqweni.? UKasserchun uthe ukungcolisa yinto elimaza imigudu yamanzi nokusebenza kwayo, kodwa iDolobha linemizamo eliyenzayo ukulwa nalesi sihlava. ?Phakathi kwezinto esizozenza njengeDolobha sibala imikhankaso yokufundisa kanye nezisombululo zonjiniyela. Inkinga enkulu esinayo wumphakathi uqobo lwawo. Kubalulekile ukuthi senze imizamo siyiDolobha neSifundazwe ukuze sikwazi ukunqoba lesi sihlava.? UMasipala usuwakhe waphinde wafaka amaTrash Trap nama-Oil Seperation Weirs emifuleni eminingi ehlukene echithela eduze nechweba. UKasserchun uthe abahlali kumele babambe nabo elabo iqhaza, ngoba uma amanzi esemaningi kakhulu kunokwenzeka udoti ugcine usungena emabhishi uma Abahlali bangabika ukuvaleka kwemigudu yamanzi ku-080 13 13 013 noma ku-email: Eservices@ durban.gov.za Izinkumbi zabantu beziphume ngothi lwazo ukuzothamela umkhankaso wokufundisa ngemithetho kaMasipala lapho bebefundiswa kabanzi ngalokho okuvumelekile nokungavumelekile eDolobheni. Isithombe: SITHUNYELWE le mikhankaso izogxila kakhulu kule mithetho esanda kuphasiswa okubalwa kuyo umthetho olawula izinto eziwuhlupho kanye nendlela yokuziphatha ezindaweni zomphakathi, owezakhiwo
Ivoti Lakho Liyizwi Lakho
USihlalo weKomidi loSizo oluPhuthumayo nezindaba zoMphakathi uKhansela uZandile Gumede ngenkathi evota nabahlali baseMaoti, eNhla neTheku okhethwni lwesihlanu lohulumeni basekhaya mhlaka 3 Agasti. Isithombe: JESSIE SINGH eziyinkinga kanye nowamabhishi kaMasipala. U-Oomar uthe ngaphezu kwale mijikelezo abayenzayo, kumele abahlali baseThekwini bazijwayeze ukufunda imithetho kaMasipala etholakala ku-website ethi: www.durban.gov.za. ?Sihlose ukushintsha indlela abantu abaziphatha ngayo njengoba siqinisekisa ukuthi abantu bagcine beyazi imithetho kaMasipala.? Imijikelezo yokufundisa ngemithetho yenzeka njalo ngoLwesithathu, uLwesine kanye noLwesihlanu phakathi kwehora leshumi ekuseni kuya kwelokuqala emini emarenki amatekisi kanye naseduze nezitolo. princess.nkabane@durban.gov.za
ITheku lithuthukisa abesifazane
PRINCESS NKABANE UMASIPALA weTheku kule minyaka yezimali edlule kusukela ngo-2013 kuya ku-2015 ugixabeze amabhizinisi abesifazane angu-2 000 ngezinkontileka zezizumbulu zemali ebalelwa kuR4 billion emkhakheni wezokwakha kanye nobunjiniyela. Lokhu kuvezwe wuKhansela uZama Sokhabase ngenkathi kuneYoung Women?s Empowerment Dinner ebihanjelwe ngamakhulu abesifazane abebeqhamuka emikhakheni eyahlukene okubalwa kuyo ekahulumeni, owamabhizinisi, ezenkolo kanye nezikhungo zemfundo ephakeme. Lo mcimbi ububanjelwe eShaka Marine World mhlaka 15 Julayi. USokhabase uthe uMasipala ufuna ukuqinisekisa ukuthuthukiswa kwabantu besifazane ukuze bakwazi ukuqhubeka nokufaka isandla ekuthuthukisweni kweTheku kwezomnotho. ?Uthe: ?Amabhizinisi amancane nasafufusa aphethwe ngabantu besifazane asehlomule kakhulu njengoba angu- 620 asethole uqeqesho ngaphansi kwezinhlelo zethu. Amanye amabhizinisi athole izizumbulu zezigidi zamarandi okwenze akwazi nokudala amathuba omsebenzi.? princess.nkabane@durban.gov.za
ITHEKU LIHLINZEKA NGEZIDINGO KUBANTU